Top 6 chai nước hoa Louis Vuitton cho nam, nữ được ưa chuộng | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 6 chai nước hoa Louis Vuitton cho nam, nữ được ưa chuộng | Muasalebang in Muasalebang
I-Louis Vuitton wumkhiqizo odumile emhlabeni wonke onemikhiqizo yokunethezeka ephezulu. Lapho, Louis Vuitton perfume Ingenye yemikhiqizo yenkampani eyaziswa kakhulu futhi edayiswa kakhulu. Ngakho-ke iyiphi i-perfume kaLouis Vuitton ethandwa kakhulu kwabesilisa nabesifazane? Ake sithole ndawonye Amabhodlela angama-6 athandwa kakhulu e-Louis Vuitton namuhla nathi ngesihloko esingezansi!
1 Mayelana nomkhiqizo wamakha uLouis Vuitton
2 Isizathu sokuthi usebenzise amafutha e-Louis Vuitton
3 Amabhodlela angama-6 adume kakhulu e-Louis Vuitton abesilisa nabesifazane
3.1 3.1 Louis Vuitton California Dream Perfume 100ml kokubili amadoda nabesifazane
3.2 3.2 I-Louis Vuitton Ebhishi i-Eau De Parfum yabesifazane
3.3 3.3 I-Louis Vuitton Les Sables Roses yamakha abesilisa nabesifazane
3.4 3.4 I-Louis Vuitton Afternoon Swim Perfume yabo bobabili abesilisa nabesifazane
3.5 3.5 I-Louis Vuitton Rose Des Vents Perfume Pink
3.6 3.6 Iziqholo zikaLouis Vuitton Ombre Nomade zabesilisa nabesifazane
4 Imiyalo yokusebenzisa i-perfume eyi-Louis Vuitton
Mayelana nomkhiqizo wamakha uLouis Vuitton
I-Louis Vuitton (ebizwa nge-LV) ingenye yemikhiqizo ehlonishwa kakhulu emhlabeni evela e-France, eyasungulwa ngo-1854. Imikhiqizo ye-Louis Vuitton yonke imigqa yokunethezeka ephezulu enezinhlobonhlobo eziningi zamamodeli, njengemfashini, izesekeli, izikhwama, izicathulo, ubucwebe, njll. Yonke imikhiqizo iningi lenziwe ngesikhumba sangempela noma ngeseyili ye-premium. Imikhiqizo ye-LV ibonakala ngephethini yelogo ye-LV ehlanganiswe nezimbali ze-lobe.
Uhlobo lwe-LV ngo-2019 lusezingeni lemikhiqizo ebaluleke kakhulu emhlabeni ngumagazini weForbes. Ngesikhathi esifanayo, le nkampani ingumholi emkhakheni wemfashini ephezulu enenani elifinyelela ku-39.3 billion USD. Ngakho-ke, yonke imikhiqizo ye-LV ngokujwayelekile futhi Louis Vuitton perfume Ikakhulukazi, nakuba kubiza, futhi ithola ukunakwa kwama-fashionistas emhlabeni jikelele.
Isizathu sokuthi usebenzise amafutha e-Louis Vuitton
Louis Vuitton perfume iwumugqa womkhiqizo owaziswa kakhulu futhi othandwa abalandeli abaningi bobuhle kusukela yethulwa kuze kube manje. Ngakho-ke kufanele usebenzise amakha kaLouis Vuitton noma cha? Ukuze uqonde kangcono, ake sibheke izizathu zokusebenzisa lesi siqholo se-LV kanje:
Amakha Inomklamo owubukhazikhazi, odonsa amehlo odala ukuphimisela okuvelele uma isetshenziswa kanye nomklamo ohlangene okulula ukuwuphatha ephaketheni lakho futhi uyisebenzise noma yikuphi.
Iningi lemigqa yamakha e-Louis Vuitton ikhishwe ku-100% wezithako zemvelo ze-premium kanye nezinqubo eziqinile zokukhiqiza zesimanje nezithuthukisiwe zihlolwa ngokuqinile ngaphambi kokufakwa emakethe. Ngaleyo ndlela, ukuqinisekisa ukuphepha kanye nokulunga kwabasebenzisi uma kusetshenziswa, ngaphandle kokucasula isikhumba.
I-Louis Vuitton perfume ilungele bonke abasebenzisi, abesilisa nabesifazane.
I-LV perfume inezinhlobonhlobo nokunotha kwamakha ukusiza abasebenzisi ukuthi bakhethe kalula iphunga abalithandayo.
Iphunga elihlala isikhathi eside le-Louis Vuitton perfume lihlala usuku lonke ukuze abasebenzisi bakwazi ukucwebezela ngokuzethemba noma kunini, noma kuphi.
>> Inkomba: Iziqholo ezi-3 eziphezulu ezikhangayo zikaJean Paul Gaultier zabesifazane
Amabhodlela angama-6 adume kakhulu e-Louis Vuitton abesilisa nabesifazane
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zabasebenzisi, uhlobo lwe-Louis Vuitton lwethule imigqa ehlukahlukene yamakha enemiklamo ehlukene kanye nephunga elimnandi. Ndawonye Buyekeza amabhodlela angama-6 adume kakhulu e-Louis Vuitton abesilisa nabesifazane namuhla Okulandelayo:
3.1 Louis Vuitton California Dream Perfume 100ml kokubili amadoda nabesifazane
Louis Vuitton California Dream Perfume LV Unisex perfume ibhodlela kokubili amadoda nabesifazane. Lesi siqholo seCalifornia Dream sikhiqizwa ngo-2020 ngumqambi onamakhono uJacques Cavallier Belletrud. Idizayini yalo mkhiqizo isesimweni sebhodlela elipinki elihlangene elicwebezelayo, kancane kancane lincibilika libe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngaleyo ndlela kusiza ukudala ubunkimbinkimbi, ubuhle nokudala ukuphimisela okuvelele kubasebenzisi.
Ngaphandle kwalokho, LV California Dream perfume Leli phunga liqukethe izithako zemvelo ezihlanganisa i-tangerine, ipheya, i-An Tuc Huong, isihlahla se-Vang, i-musk, njll. Ukusuka lapho, iletha iphunga lasempumalanga elifudumele, elinothando futhi libonisa ukushona kwelanga okucwazimulayo okugcwele ubuhle esibhakabhakeni. Lo mugqa womkhiqizo unamandla okugcina impepho kahle kuze kufike emahoreni angu-6-7 ukuze abasebenzisi bazizwe beqiniseka futhi bekhanga.
Intengo yesithenjwa: 8,990,000 VND / 100ml ibhodlela
>>>Funda kabanzi: I-Perfume Yabesifazane engu-8 ehamba phambili yangempela namuhla
3.2 I-Louis Vuitton Ebhishi i-Eau De Parfum yabesifazane
I-Louis Vuitton Ebhishi i-Eau De Parfum ibhodlela LV amakha abesifazane isanda kwethulwa ngo-2021 eqoqweni le-Les Colognes. Idizayini yaleli bhodlela lamakha inemibala ekhumbuza ukushona kwelanga ehlobo enyakaziswa i-gradient ukusuka kokubomvu nokuwolintshi ukuya kokumhlophe okuluhlaza okwesibhakabhaka. Okwamanje amakha abesifazane Lo mkhiqizo uqukethe izithako zezithelo zasehlobo ezifana ne-Yuyu tangerine, i-Neroli orange ukuqinisekisa ukuthi iphephile, ilungile futhi isebenziseka kalula.
Le I-Louis Vuitton Osolwandle i-Eau De Parfum iyiphunga le-tangerine laseJapan le-Yuyu elinamandla okuqhuma, lisha esikhumbeni. Lapho ubusha buphela, ungqimba lwesibili lwamanothi luhlangana namakhambi e-rosemary, i-clove, ne-musk. Ngesikhathi esifanayo, ngamanothi e-pepper e-pink, i-perfume iba ngokulinganisela, ihlanzekile, futhi ihlanganisa imizwelo engapheli ebheke olwandle oluluhlaza.
Intengo yesithenjwa: 9,000.0000 VND/ibhodlela lika-100ml
3.3 I-Louis Vuitton Les Sables Roses yamakha abesilisa nabesifazane
I-Louis Vuitton Les Sables Roses iyibhodlela lamakha le-LV labesilisa nabesifazane elethulwe ngo-Ephreli 2019 elidumile kubasebenzisi abaningi. Leli bhodlela lamakha lephunga elilinganiselwe ligqugquzelwe amahlathi amakhulu e-rose, liveza ubuhlakani, ukucophelela, lidala umbono omuhle. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo ubonisa ngokucacile inhlanganisela evumelanayo yama-rose petals aminyene kanye nempepho ekhangayo yaseMpumalanga Ephakathi.
Ngakolunye uhlangothi, lesi siqholo se-Louis Vuitton Les Sables Roses sethula izendlalelo ezi-3 zokudala, iphunga elimnandi elihehayo. Esitezi sokuqala kunephunga lamanothi anokhuni kanye nama-rose petals abonisa injabulo yokugcina ukuzwana. Phakathi nephunga elimnandi kunenhlanganisela kapelepele omnyama, i-ambergris kanye nokukhanya kwesafroni ebuthakathaka. Ngesikhathi esifanayo, inothi lokugcina liwukuqala kwe-rose nezinkuni, okuletha inhlanganisela emnene futhi eqabulayo engapheli. Ngaleyo ndlela iletha iphunga elihehayo, elithambile futhi inamandla okugcina iphunga elimnandi kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 10,500,000 VND/ibhodlela lika-100ml
>>>Funda kabanzi: [Review] TOP 6 best men’s perfumes 2021 real and cheap
3.4 I-Louis Vuitton Afternoon Swim Perfume yabo bobabili abesilisa nabesifazane
I-Louis Vuitton Afternoon Swim iyibhodlela lamakha likaLouis Vuitton elethulwe ngo-Ephreli 2019. Idizayini yalesi siqholo intekenteke impela ngebhodlela elide elidonsa amehlo, elenziwe ngendebe kanye nongqimba lwengilazi olucacile elenza umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ocwebezelayo wesixazululo ngaphakathi njengombala wamanzi olwandle.
Ngaphandle kwalokho, lesi siqholo se-LV Afternoon Swim sinephunga elingokwemvelo, elisha nelinamandla njengoba negama laso lisho. Izithako eziyinhloko zaleli bhodlela lamakha ezixutshwe namawolintshi aseSicilian, ama-mandarin, nama-Bergamot zifana novithamini C ephunga elimnandi. Lo mugqa wephunga we-LV awukhiphi nje izinkanuko zehlobo elikhazimulayo, kodwa futhi unikeza umuzwa wamandla nokuqabuleka. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo unamandla okugcina iphunga kahle kuze kube amahora angu-6-7.
Intengo yesithenjwa: 9,180,000 VND/ibhodlela lika-100ml
>>>Inkomba: Iziqholo ezi-5 eziphezulu ze-YSL zabesilisa nabesifazane abanephunga elimnandi eliheha kakhulu
3.5 I-Louis Vuitton Rose Des Vents Perfume Pink
I-Louis Vuitton Rose Des Vents ibhodlela Louis Vuitton perfume yethulwa ngo-2016. Lesi siqholo sisesimweni se-Unisex esilungele abesilisa nabesifazane. Ngasikhathi sinye, kubuye kwelulekwe ukuthi kusetshenziswe ikakhulukazi abantu abangaphezu kweminyaka engama-25. Leli bhodlela lamakha linomklamo opinki othambile, omuhle kanye nomklamo ohlangene, kulula ukuwuthwala futhi uwusebenzise noma yikuphi.
Ngaphandle kwalokho, izithako eziyinhloko zalesi perfume ye-Louis Vuitton Rose Des Vents zifaka i-peach, i-currant emnyama, i-Turkish rose, iris, ukhuni lomsedari, impande ye-iris, i-musk emhlophe, amaqabunga ezimbali.Ngakho umkhiqizo ubonisa indiza yothando yothando nobuhle baphakade. Ngesikhathi esifanayo, inephunga elimnandi, elihle nelimnene impela, elinamandla okuhlala isikhathi eside.
Intengo yesithenjwa: 8,100,000 VND/ibhodlela lika-100ml
3.6 Iziqholo zikaLouis Vuitton Ombre Nomade zabesilisa nabesifazane
I-Louis Vuitton Ombre Nomade iyibhodlela le-perfume le-Louis Vuitton le-unisex labesilisa nabesifazane elasungulwa ngo-2018. Lo mkhiqizo unomklamo webhodlela elimnyama elihlinzeka ngesitayela esiqinile, esiqinile kanye nosayizi ohlangene, oqinile esandleni. Lesi siqholo sinephunga eliqinile laseMpumalanga Ephakathi elixutshwe nezinkanuko ezilungele abantu abangaphezu kweminyaka engama-25 ubudala.
Ikakhulukazi, isithako kule perfume ye-LV Ombre Nomade iqukethe izithako ze-agarwood ukusiza ukudala ukugqama komkhiqizo. Ngaleyo ndlela kusiza abasebenzisi bazizwe bemsulwa, befudumele futhi bemnene kodwa beheha kancane. Ibhodlela lamakha futhi lisebenzisa inhlanganisela yezinye izithako ezihlanganisa i-musk, okusajingijolo, i-musk kanye ne-rose ebaluleke kakhulu.
>>>Funda kabanzi: [Review] Amakha ayi-6 aphezulu ahlala isikhathi eside e-Zara emadodeni
Imiyalo yokusebenzisa i-perfume eyi-Louis Vuitton
Iphunga lizohlala isikhathi eside futhi likhuthaze umphumela walo ogcwele uma lisetshenziswe ngendlela efanele nangendlela efanele. Ngakho-ke, ukusebenzisa Louis Vuitton perfume kahle, kufanele ubheke imiyalo ozoyisebenzisa ngokulandela lezi zinyathelo:
Isinyathelo 1: Fafaza amakha uma isikhumba sisezingeni eliphezulu, singasomile kakhulu noma simanzi kakhulu.
Isinyathelo sesi-2: Khetha indawo enesikhumba esincanyana, isitsha semithambo yegazi ukuze ube nephunga elimnandi elinjengemva kwezindlebe, izihlakala, isifuba, intamo bese ufafaza amakha ngobumnene kulezo zindawo zesikhumba.
Isinyathelo sesi-3: Unganyakazi izihlakala zakho ndawonye noma uhlikihle indawo osanda kufafaza kuyo amakha ngoba lokhu kuzokwenza izinhlayiya zephunga zindize ngokushesha.
Nalu ulwazi okwabiwe ngalo Amabhodlela angama-6 adume kakhulu e-Louis Vuitton abesilisa nabesifazane. Ngethemba ukuthi lokho kukusiza ukuthi uqonde kangcono futhi ukhethe isiqholo esifanelana nezidingo zakho.
Kem dưỡng ẩm Laneige có tốt không? Hiệu quả dưỡng ẩm như thế nào? Giá bao nhiêu? | Muasalebang